Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » ITB Berlin dia hatao araka ny voalahatra! Tokony?
Taorinan'ny alatsinainy iray manontolo ny fisalasalana ary tsy nisy hevitra, ITB Berlin tweeted at 18:30 (6:30 pm) German time the show will go on . The message: ‘ITB Berlin will take place as scheduled despite the Coronavirus uproar.‘
Mpamaky iray avy any Hannover, Alemana no nilaza hoe: “Hadalana, hadalana tanteraka; tokony hahemotra izany. Toa nisy ny fanambarana nilaza fa mbola mitohy ny ITB. Manantena aho fa tsy misy olona marary. Tena mendrika ve ny risika? Ny hopitaly ao Berlin dia tsy afaka manompo marary mihoatra ny 60 ao amin'ny efitrano mitokana, ary nampitandrina ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana izy ireo. "
eTurboNews mialoha mialoha dia nanantena ny hanafoana ny ITB Berlin. Tsy nisy hevitra rehefa niresaka tamin'i Messe Berlin, mpikarakara ny ITB, ny Antenimieran-doholona any Berlin, ary ny Ministeran'ny Fahasalamana ny eTN. Ny valiny voalohany dia tonga tamin'ny 6 ora sy sasany hariva avy tao amin'ny ITB taorian'ny Minisitry ny Fahasalamana, Spahn, izay tsy niresaka afa-tsy ireo hetsika marobe tany Alemana momba ny Coronavirus.
Mpamaky iray avy any Milan, Italia, no nilaza hoe: "Ho ahy, ny fihanaky ny aretina any Milan dia vokatry ny fampirantiana BIT natao tamin'ny fiandohan'ity volana ity (mpitsidika 40,000). Ny ITB dia tsy tokony hahatonga antsika hanimba ny fahasalamantsika ary handany fotoana. Heveriko fa na dia iray amin'ireo mpandray anjara amin'ny ITB 100,000 2 izay manana ny soritr'aretina, dia tokony hiparitaka any Alemana mandritra ny roa herinandro farafahakeliny isika rehetra. ”
Ho valiny eTurboNews, ITB explained: There are no restrictions for Chinese, Asian, or Italiens traveling to Germany. Travelers from some countries may be asked when entering the EU Schengen region if they visited countries affected by Coronavirus or had contact with people from such regions.
Hiarovana ireo mpampiranty sy mpitsidika ao amin'ny ITB dia hanampy mpiasa hanadio sy hamono otrikaretina izahay. Ho fanampin'izay, manome sosokevitra izahay ho an'izay mandray anjara mba hanasa tanana fa tsy hikohaka. Mety tsy mety ihany koa ny mifanome tanana.
Ny mpikarakara ITB Berlin dia tena tompon'andraikitra amin'ny fanohizana ny fanamafisana fa hitohy ny fampisehoana. Tsy mbola tara ny fanafoanana, fa ny tompon'andraikitra dia ny manao izany ASAP.
Ny hetsika dia tokony ho nofoanana herinandro talohan'io ary, manoloana ny porofo mazava momba ny fandefasana asymptomatika, izany dia loza mety hitranga sy tsy maintsy hialana. Ataon'izy ireo tandindomin-doza tsy misy antony ny vahoaka alemanina sy ny rafi-pahasalamana alemanina. Ataon'izy ireo tandindomin-doza ny olona sy ny rafi-pahasalamana eto amin'izao tontolo izao. Aza adino fa ny rafi-pahasalamana amin'ny ankamaroan'ny tany dia tsy dia ampy fitaovana toa an'i Alemana hiatrehana ny valanaretina voajanahary toy izany.
Fa maninona no miloka miaraka amin'izany?
Izy ireo dia manome ohatra ratsy dia ratsy ho an'ny olona eran'izao tontolo izao, izay mandoto ny marika ITB sy Alemanina.
Ny RKI dia tsy nanazava mazava ny risika ateraky ny hetsika (ny risika avo lenta ho an'ny besinimaro amin'ny fanangonana akaiky olona marobe avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao eo ambanin'ny fepetra voaporofo fa fandefasana asymptomatika). Na izany aza dia navelan'izy ireo hampiasan'ny mpikarakara ITB amin'ny fomba diso be izy ireo. Angamba tsy fantatr'izy ireo izany. Ary koa, ny AUMA dia toa mametraka ny tombotsoan'ny orinasa alohan'ny tombontsoan'ny tena mahantra, ny tsy salama, ary ny zokiolona amin'ny firenena rehetra manerantany.
Manantena aho fa ny olon-dehibe iray dia hampijanona ity korontana ity.
Mpamaky iray avy any Krakow, Polonina no nilaza hoe: Ahoana raha olona iray ihany no voa? Azo antoka fa hiparitaka amin'ny olon-kafa ao anatin'ny minitra vitsy ity virus ity. Ny famonoana otrikaretina dia TSY ampy. Tsy mahalala na inona na inona momba ny virus isika, momba ny fanasitranana, maninona no atahorana izany rehetra izany?
Any Alemana, dia vitsy ihany ny tranga voamarina fa voan'ny virus coronavirus (SARS-CoV-2) hatreto. Izy rehetra dia samy misy ifandraisany amin'ny tranga iray amin'ny aretina (cluster de infecteurs) ao amin'ny orinasa iray any Bavaria, na tranga eo amin'ireo olom-pirenena alemanina nody avy tany Wuhan tamin'ny fiandohan'ny volana febroary 2020. Ny ankamaroan'ny marary dia efa sitrana ary efa navotsotra avy amin'ny hopitaly.
Mpamaky iray avy any Munich, Alemana, no nilaza hoe: Toa misy fiatraikany amin'ny hetsika toa an'i ITB ihany koa ny fampahalalam-baovao mampalahelo mahita ny fahazoan'ny olona kely. Ririnina 2017/18 dia olona 25,000 no maty tany Alemana tamin'ny gripa mahazatra - ary tsy nisy nieritreritra ny hanafoana ny hetsika toa ny ITB, sns. Ny taham-pahafatesana dia mitovy.
Ny Robert Koch Institute dia manara-maso tsy tapaka ny toe-javatra, manombatombana amin'ny fampahalalana rehetra misy ary manombatombana ny loza mety hitranga amin'ny mponina any Alemana. Amin'ny sehatra manerantany dia mivoatra be ny toe-draharaha ary tsy maintsy raisina am-pahamatorana. Tsy dia ampy ny angona amin'izao fotoana izao hahafahana manao tombana farany ny hamafin'ity aretin'ny taovam-pisefoana ity. Ny fizotran'ny aretina mahatsiravina sy mahafaty dia voarakitra an-tsoratra amin'ny tranga sasany. Azo atao ihany koa ny fifindran'ny aretina sy ny rojom-pifamoivoizana any Alemana, satria antenaina ny fanafarana tranga hafa any Alemana. Na eo aza izany, tsy misy porofo milaza fa niparitaka be ny otrikaretina virosy tany Alemana ankehitriny. Noho io antony io dia mihena hatrany ny loza ateraky ny fahasalaman'ny mponina any Alemana. Miorina amin'ny fantatra tamin'ny 10 febroary, tsy mazava raha azo atao ny mametra ny fiparitahan'ny pathogen manerantany; ity tombana ity, noho izany, dia afaka miova amin'ny fotoana fohy noho ny valim-pikarohana vaovao.
Namaky toy izao ny mpamaky iray avy any Sri Lanka: “Ny loza mety hitrangan'ny Coronavirus - ny efitrano fandraisam-bahiny rehetra dia manana rafitra rivotra mitovy, ary toy izany ny fiparitahany tao amin'ny Diamond Princess.”
Ny paikady any Alemana dia ny hahazoana fotoana hahafahana miomana sy mianatra antsipiriany bebe kokoa momba ilay viriosy, ny fiatraikany, ny fomba fielezany, iza ny vondrona atahorana, ary ny fomba hiarovana azy ireo. Tanjona iray hafa ny fananana COVID-19 sy ny viriosy misy fiantraikany matetika tsy hihaona mba hialana amin'ny fetra farany ambony azo atao amin'ny toeram-pitsaboana.
Raha vantany vao fantatra ny tranga maro any Alemana ary miharihary fa tsy azo hajanona ny fiparitahana dia tokony hifantoka amin'ny fiarovana ireo vondrona sy olona mampiseho risika avo kokoa ary manana fihetsika mahery vaika kokoa momba ilay virus.
A reader from London, UK, has a comment that summarizes concerns saying: “I think we need to watch what happens in Italy and South Korea very carefully this week as there could be real risks for people but also the wider world if someone attends with it and could infect anyone from anywhere and it spread globally. That’s a big responsibility for [an] event to have. Lasa fandinihana matotra izany izao. Talohan'izay dia tsapako fa mety ny manohy ny ITB - tsy dia azoko antoka izao."
Mpamaky iray avy any Malezia no maniry ny handrosoan'ny ITB milaza hoe: “TSY tokony hofoanana ny ITB. Ny antony lehibe dia satria tsy azo sakanana ny toekarena manerantany. Tsy vahaolana ny fampitsaharana ny dia mankany amin'ny firenena tsy misy fiatraikany ary mety hidika izany fa mety ho lasa fahasimbana antoka amin'ny ady atao amin'ny coronavirus ny orinasan-dia. Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nilaza foana fa 'aza atsahatra ny fivezivezena sy ny varotra.' na dia taorian'ny nanambaran'ny OMS aza fa vonjy taitra ny valanaretina erantany. Tsy areti-mandringana io satria nahatsapa ny WHO fa mbola ao anatin'ny toe-javatra fanaraha-maso izy io. ”
Gloria Guevara, Filoha sady Tale jeneralin'ny World Travel and Tourism Council | WTTC , nilaza tamin'ny eTurboNews: “Miasa mivantana amin'ny World Health Organization izahay. Tsy nilaza tamin'ny olona mihitsy izy ireo mba tsy handeha. Tokony hiezaka ny hampijanona ny fikorontanana isika ary handray andraikitra amin'ny andraikiny ho tombontsoan'ny sehatra misy antsika. ”
kitiho raha mila fanazavana fanampiny
Midira amin'ny Safertourism, PATA, ny Birao Afrikana momba ny fizahantany, LGBTMPA amin'ny adihevitra lehibe momba ny Coronavirus hisakafoanana ny 5 martsa ao amin'ny Grand Hyatt any Berlin. Hihaona amin'i Dr. Peter Tarlow, iray manam-pahaizana malaza indrindra amin'ity sehatra ity. kitiho eto to register.